Huawei MediaPad T5 na -enweta ụdị agba ọhụrụ Mist Blue | Androidsis
Huawei MediaPad T5 na-anata ụdị agba ọhụrụ Mist Blue
Nyaahụ anyị na-ekwu okwu banyere mbipụta Turbo ọhụrụ nke Huawei MediaPad M6, nke kachasị ike mbadamba nkume dị na ụlọ ọrụ ndị China nwere na, na mgbakwunye na ngwaọrụ ndị ọzọ dị elu, na-eje ozi dị ka ụlọ maka ụlọ ọrụ Kirin 980.
Ugbu a, anyị na-ekwu maka ụdị agba dị iche iche na-enweta Mgbasa ozi MediaPad T5 nke ụlọ ọrụ ahụ, mbadamba nkume nke ghọrọ ọrụ na February nke afọ gara aga.
Onye na-emepụta China, site na mbipụta ọ bipụtara na Twitter n'oge na-adịbeghị anya, nke bụ nke dị n'okpuru, wepụtara na vidiyo na na MediaPad M5 enwetala Mist Blue agba iche. Nke a dị ọcha, dịka a pụrụ ịhụ anya, na-enyekwa ya ikuku ọhụụ nke ga-atọrịrị ihe karịrị otu onye ọrụ na-ahọrọbeghị ya.
Banye na -acha anụnụ anụnụ na nkọwa 1080p zuru oke HD na ngosipụta dị egwu 10.1 the # HUAWEIMediaPadT5. Ugbu a dị na Mist Blue.
Mụtakwuo: https://t.co/2rS6iNA5EQ pic.twitter.com/GHyLBH5Kzh
- Huawei Mobile (HuaweiMobile) August 28, 2019
China dị ka ọ bụ naanị ahịa nke nwere nhọrọ ọhụrụ a ugbu a. Yabụ, mpaghara dịka Europe na mba dịka United States ka na-enweghị ike ijide ya. Agbanyeghị, anyị na-atụ anya na a ga-ewepụta ya n'oge na-adịghị anya, n'agbanyeghị na ọ nwere ike ịbụ obere oge tupu nke ahụ eme.
MediaPad M5 na-aga n'ihu na-akwalite dị ka ihe magburu onwe smart mbadamba na ahịa ekele ya kacha mma arụmọrụ. Kirin 960s chipset nwere ọtụtụ ihe iji nọgide na-enye, na ọbụna karịa mgbe a na-enye ya ya na ụdị dị iche iche nke RAM na ebe nchekwa ROM nke ngwaọrụ a, nke bụ ihe ndị a: 3 + 32 GB, 4 + 64 GB na 6 + 128 GB.
Ihuenyo ọ na-eburu bụkwa nke ọzọ nke ike ya. Nke a bụ IPS LCD teknụzụ nwere diagonal nke 8.4 sentimita asatọ na mkpebi FullHD + nke pikselụ 2,560 x 1,600. Batrị ya, n'aka nke ọzọ, na-adị mgbe niile, ya na 5,100 mAh kwadoro nke a. N'aka nke ọzọ, ọnụ ya na-akwado igwefoto 13 MP n'azụ na igwefoto n'ihu nke 8 MP.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Huawei MediaPad T5 na-anata ụdị agba ọhụrụ Mist Blue
Emebere Motorola One Action na Spain
Onye OnePlus 7T ga-abịa na ihuenyo 90 Hz na mkpebi 2K